China ibhokisi yolusu ephethe iphepha lokufaka ifaka kunye nePV yohlobo lwebhokisi yoMvelisi kunye noMthengisi | Huaguang
Iibhokisi yeZipho zangasese
Ibhokisi yoKhathalelo lolusu
Ubukhulu: 28 * 17 * 7cm
Ngophuhliso kunye nokuhlaziywa kwetekhnoloji kunye nezixhobo, inkqubo yemveliso yokupakisha ibhokisi yesipho iye yalawulwa ngamashishini amaninzi nangakumbi. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha kuphucule kakhulu ukusebenza kwemveliso, kwaye izixhobo ezintsha ngokuthe ngcembe zithathe indawo yomsebenzi odinisayo. Ukuphuculwa kwesoftware kunye nehardware kuyiphucule imveliso
Uhlobo lwebhokisi yesipho sazo zonke iintlobo, ukusuka kumanqwanqwa esakhiwo ukuya phezulu nasezantsi ngokudityaniswa kwesiciko kunye nefom yesiseko, ebethelelwe ngokudibanisa ibhokisi yecartridge, kukho ukuvulwa nokuvalwa kohlobo lomnyango, incwadi edityanisiweyo yohlobo lwendibaniselwano, wabeka Isiseko seebhokisi zesipho, ezi ntlobo kubume besakhelo esisiseko, abayili benze i-kaleidoscope yohlobo lwebhokisi, ekupakisheni iimveliso ezibekwe kwigama elipholileyo. Namhlanje ngale bhokisi yohlobo lwebhokisi yencwadi yokwazisa ngohlobo lwebhokisi kuwe:
1. Ibhokisi yohlobo lwencwadi: yenziwe ngeqokobhe langaphandle kunye nebhokisi yangaphakathi. Iringi yegobolondo yangaphakathi ijikeleze ibhokisi engaphakathi, kwaye emazantsi ebhokisi engaphakathi incanyathiselwe eludongeni lwangasemva. (jonga ifoto)
2.Lid kunye nesiseko sebhokisi: yenziwe ngebhokisi yokugubungela kunye nebhokisi esezantsi, isetyenziselwa ukubopha okuphezulu, okuphantsi kunye nokuncinci. (jonga ifoto)
3.Ibhokisi yomnyango ophindwe kabini: yenziwe ngebhokisi engaphandle yasekhohlo nakwibhokisi engaphandle yasekunene, nebhokisi engaphakathi kwicala elingaphakathi nakwibhokisi yangaphandle nangasekunene elinganayo. (jonga ifoto)
4. Iibhokisi ezimilise okweentliziyo: iibhokisi zimile okweentliziyo, ubukhulu becala zinobumba besiciko kunye neebhokisi zekhusi. (jonga ifoto)
5.Ibhokisi yokugquma ngohlangothi nangasezantsi: Ibhokisi yokugubungela yenziwe ngebhokisi yokugubungela kunye nebhokisi engezantsi. Ibhokisi yokugquma kunye nebhokisi engezantsi zinobungakanani obulinganayo. (jonga ifoto)
6.Ibhokisi yeDraw: yibhokisi enedrowa esebenza. Inokutsalwa kwaye ivulwe ngokulula xa isetyenziswa. (jonga ifoto)
7. Ibhokisi yesikhumba: ibhokisi engenanto eyenziwe ngebhodi yoxinano enezinto ze-PU ezinamathiselwe ngaphandle, ezijongeka njengebhokisi yesikhumba. (jonga ifoto)
8. Ibhokisi ejikelezayo: Ubume bebhokisi bujikeleze ngokugqibeleleyo okanye i-ellipse, kwaye uninzi lwazo lunesakhiwo sebhokisi yesembozo kunye nebhokisi yesiseko. (jonga ifoto)
9.Ibhokisi enamacala amathandathu / enamacala ayi-polygonal: ibhokisi inamacala amathandathu kwaye ubukhulu becala bubume beqweqwe kunye nesiseko sekhava. (jonga ifoto)
10. Ibhokisi evula ifestile: icala elinye okanye amabini ebhokisini kufuneka avulwe, kwaye i-PET ebonakalayo kunye nezinye izinto kufuneka zincanyathiselwe ngaphakathi ngaphakathi, ukubonisa ulwazi lwesiqulatho. (jonga ifoto)
11. Ibhokisi yeenkuni esulungekileyo: iibhokisi ezenziwe ngomthi oqinileyo, umphezulu wazo opeyintwe ngepeyinti, kunye nezinye iibhokisi ezenziwe ngomthi omsulwa ngaphandle kokufaka umbala. (jonga ifoto)
12. Ibhokisi yokusonga: ipleyiti engwevu njengamathambo, iphepha lobugcisa elinamaphepha agutyungelweyo okanye elinye iphepha, ugoba ipleyiti engwevu ukushiya isithuba somgama othile, xa usetyenziselwa ukuxhasa yonke imilo enamacala amathathu, ungasonga ngokukhululekileyo. (jonga ifoto)
13. Ibhokisi yeFlip: yindibaniselwano yesiciko kunye nebhokisi yesembozo esisezantsi kwaye ufake isiciko somda kunye nebhokisi yokugquma yesiseko. Umahluko kukuba umva webhokisi unanyathiselwe ngephepha leethishu, elinokubuyiselwa umva libuye ngokukhululekileyo. (jonga ifoto)
Egqithileyo Iibhokisi zeKhadibhodi yeZipho eziPrintwe ngeVenkile eQhelekileyo ngeRibhoni
Okulandelayo: I-logo eprintiweyo yokuprinta ikofu engama-350g kwiphepha elimhlophe ibhokisi yangaphandle
ibhokisi yesikhumba kunye nesipho sokupakisha iphepha ...
Kwizinga eliphezulu ezilahlwayo ibhokisi siko ibhokisi / ikomityi / ...
Ezishicilelweyo Ilogo zekhadibhodi Cosmetics Makeup ...